Vaovao - Ahoana no hitazomana ny akanjo mando
1. Tape jaspa
Raha palitao vita amin'ny kodiarana ny palitao dia tokony apetrakao amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy mifofofofo avy hatrany ny akanjo ampiasaina aorian'ny fampiasana azy, ary ataovy maina ny akanjo mando. Raha misy loto eo amin'ny palitaonao dia azonao apetraka eo ambony latabatra ny palitaonao ary esory moramora miaraka amin'ny borosy malefaka atsoboka anaty rano madio mba hanasana ny loto eo amboniny. Tadidio ny palitao mirakitra kasety Tsy azo kosehina amin'ny tanana io, apetraka amin'ny masoandro ihany, ary tsy ho may amin'ny afo, ary tsy afaka diovina amin'ireo savony misy alkaly ireo. Ny tanjon'izany dia ny fisorohana ny fahanterana jasco. Na lasa mora vaky.
Tsy azo ampiarahana menaka ny palitao vita amin'ny kasety, ary tokony hapetaka rehefa mitahiry azy. Aza asiana zavatra mavesatra amin'ny palitao ary aza asiana zavatra mafana hisorohana ny fanerena azy amin'ny palitao. Aforitra, na triatra. Asio mothballs ao anaty boaty ny akanjo lava mifono vy mba tsy hipetaka ny palitaona.
2. Akanjo orana lamba tsy misy orana
Raha palitao ny orana oronao, rehefa lena ny orana avy amin'ny orana dia tsy azonao atao ny mampiasa ny tananao na ny satroka volom-borona mba hamoahana ny ranonorana amin'ny palitao, satria ny fanaovana izany dia mety hanimba ny fiasan'ny fibres ao anaty akanjo mafana.
Ny palitao dia tsy mety amin'ny fanasana matetika. Raha manasa azy matetika ianao dia azo inoana fa hihena ny fahombiazan'ny akanjo mando amin'ny orana. Raha heverinao fa maloto loatra ny palitaonao dia azonao atao ny manosotra moramora ilay akanjo mando amin'ny rano madio, avy eo maina ny akanjo mando dia voasasa ary ahantona mba ho maina. Rehefa maina tanteraka ny palitao dia makà vy Dory fotsiny. Raha hametraka ny palitao ianao, dia avelao ho maina tanteraka ny akanjo alohan'ny aforeto. Izany dia mba hisorohana ny fiovan'ny simika amin'ny waxy ao anaty akanjo lava noho ny hamandoana, izay hamoana ny akanjo mando.
3. Akanjo rotsakorana sarimihetsika plastika
Raha palitao an-tsarimihetsika plastika ny palaranao, rehefa avy lena ny akanjo mando dia tokony hamafana avy hatrany ny rano amin'ny akanjo mando ianao, na ento any amin'ny toerana mangatsiaka sy maina ny akanjo mando ary ampamaina izany.
Ny saron'orana sarimihetsika plastika dia tsy azo sarahina amin'ny masoandro, mainka moa fa atao anaty afo. Raha miketrona ny palitaonao ary tsy azo aolahana vy dia azonao atao ny manondraka ny akanjo mando amin'ny rano mafana amin'ny 70 ka hatramin'ny 80 degre mandritra ny iray minitra, avy eo dia esory ary apetraho amin'ny latabatra fisaka. Ampiasao malalaka ny tananao, aoraho tsara ny palitao. Aza misintona mafy ny palitao hisorohana ny fiovan'ny akanjo mando. Raha ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ny palitao vita amin'ny plastika dia mora simba na vaky. Raha tsy be loatra ny ranomaso amin'ny palitao dia azonao atao ny misafidy ny hanamboatra azy io.
Ny fomba fanamboarana dia: asio sombin-tsarimihetsika kely misy rovitra ny palitao ary apetaho eo amboniny ilay sarimihetsika. Avy eo dia ampiasao vy mandeha vy hanefena azy haingana hahafahan'ny sarimihetsika mijanona amin'ilay vaky triatra hamita ny fanamboarana. Rehefa manamboatra palitao dia tsy maintsy mahatadidy zavatra iray isika: palitao ranonorana tsy azo zairina fanjaitra. Raha tsy izany dia mety hiteraka olana lehibe kokoa amin'ny palitao.